Ihe Ntucha Ihe Ntugharị Ihe Omume Kacha Mma (Software Desktọpụ, Ngwa Ntanetị, na Ntanetị N'ịntanetị) | Martech Zone
Ezi ihe ngosi mmịfe onye software-enye gị ohere ịzụlite nnukwu n'ihu ma ọ bụ vidiyo dị iche iche customizable ngwaọrụ dị ka ndebiri, ụda, mmetụta, ederede formatting na shapes, wdg. The site faịlụ na-echekwa na dị iche iche formats dị ka. MPEG, MOV, .AVI ma ọ bụ .MP4, wdg Ya mere, ha nwere ike mfe na ndị ọzọ nyiwe dị ka Android, iOS ma ọ bụ kọmputa. Ihe ngosi ndị a nwere ike inyere gị aka ịme oge pụrụ iche dịka ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ agbamakwụkwọ a na-agaghị echefu echefu, ebe ha na-enye ụzọ kachasị mma iji gosipụta ihe okike gị. Nwere ike ịchọta ọtụtụ ngwa na ịntanetị maka ịmepụta slideshows na isiokwu a, m ga-edepụta 12 n'ime ha!
Part 1: Top 4 Free ngosi mmịfe Maker na Desktọpụ nyiwe
Ihe kacha mma slideshow onye kere edepụtara n'okpuru bụ dakọtara software maka Windows na Mac. The Filiks ike a ngosi mmịfe na foto ndị yiri nnọọ: tinye foto mbụ wee tinye ọdịyo / music, echekwa na DVD ma ọ bụ kọmputa ma ọ bụ ịkọrọ ha na-elekọta mmadụ media.
1. Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor)
Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) abụghị naanị a video nchịkọta akụkọ ma-enye gị ohere ike slideshows, ma ndị na-amalite na ndị ọkachamara. Ihe a niile na - eme ka vidiyo na ihe ngosi mmịfe gosiputara na Windows na Mac. Dị ka a na ngwá ọrụ na-emepụta slideshows na music na ikwu n'ụzọ, nzacha, overlays, wdg, Filmora awade n'elu 300 mmetụta na n'elu 20 nwebiisinka music na-ahapụ gị palitere gị creativity.
Ọ na-akwado niile na-ewu ewu faịlụ na ihe ngosi mmịfe nwere ike na-akọrọ ozugbo na-elekọta mmadụ media nyiwe dị ka YouTube, Vimeo, wdg
Ọtụtụ atụmatụ na-eme ka mmepe ngosi dị oke irè.
Kensinammuo interface na mfe iji ngwaọrụ.
Filmora nwere wuru na-ọdịyo n'ọbá akwụkwọ na-enye dị iche iche egwú n'ụdị na nsonaazụ ụda
Ọ nwere ọtụtụ iberibe music, nzacha, ngagharị ọcha, ikwu n'ụzọ na overlays.
All na-ewu ewu faịlụ formats na-akwado.
Mfe bulite na mgbasa ozi mmekọrịta.
2. Wondershare DVD ngosi mmịfe Nrụpụta
Wondershare DVD ngosi mmịfe Nrụpụta ngwá ọrụ na-enye ihe ngwọta dị ike iji zụlite slideshows nwere ọgaranya maka mkpa ọkachamara. Ọrụ nwere ike mfe ikpokọta vidiyo na foto tinyere 2D ma ọ bụ 3D mgbanwe mmetụta. Enwere ike ịkekọrịta vidiyo na nsonaazụ n'otu ntabi anya na YouTube, iPod ma ọ bụ TV.
Ọ dị oke mfe iji ngwá ọrụ a na njirimara atụmatụ.
Ọ na-enye nnukwu nchịkọta ihe oyiyi, vidiyo na usoro ọdịyo.
E nwere ike itinye edezi na mgbasa ozi tupu itinye ihe okike ikpeazụ.
Ọ naghị ekwe ka ndị ọrụ kesaa ihe ngosi site na email ma ọ bụ na CD mmekọrịta.
3 Ihe Ntụgharị Video Freemake
Freemake Video Ihe Ntụgharị bụ ezigbo software ike ngwa ngwa slideshows. Ọ na-ahazi vidiyo na foto kacha mma na ụzọ dị ịtụnanya maka Windows PC. Ọ bụrụ n’ịchọrọ itinye ọnụ ọgụgụ nke onyonyo n’ime ihe ngosi mmịfe gị, Freemake bụ nhọrọ kacha mma maka gị.
Kpamkpam free na ọ dịghị ndebanye chọrọ.
Ọtụtụ mmepụta faịlụ na-akwado.
Ọ-enye gị ohere bulite gị oru ngo na YouTube ozugbo.
Enwere ike ịfefe ihe ngosi ozugbo na DVD.
Enweghị ndebiri ma ọ bụ ndebiri iji bido.
Nwere ike iji naanị otu mmetụta na ịnweghị ike itinye ederede na slideshows.
4. Onye na-eme ihe nkiri Windows
Microsoft Windows Movie Onye kere -enye gị ohere tinye ọkacha mmasị gị collection nke music, videos na foto n'ime slideshows. Enwekwara ike ịdekọ vidiyo kpọmkwem site na kamera weebụ wee mekọrịta n'ime ọrụ ahụ. Ọ dị mfe itinye mmetụta na eserese na-ahụ anya.
Fechaa na mfe iji ikpo okwu.
Onu ogugu di ukwuu na ntughari ya na ihe nlere anya.
Ọ na-enye a kpọmkwem na-elekọta mmadụ media nkekọrịta atụmatụ.
Ọrụ na-enweghị oke ma e jiri ya tụnyere ngwaọrụ ndị ọzọ dị na ahịa.
Ọ na-akwado mmachi faịlụ.
Part 2: Best Online Slideshows Online Software
Maka ndị chọrọ ịmepụta ihe ngosi na-enweghị nbudata ngwanrọ ọ bụla ma ọ bụ wụnye ngwa, anyị achọpụtala ọ dịkarịa ala 3 nyiwe ntanetị n'ịntanetị nke na-enye gị ohere ịme ya.
4. Ngosi Ngosiputa
Ngosi Ngosi bụ ihe a maara nke ọma na-elekọta mmadụ media-ike na ngwa na-enye ohere mfe nkekọrịta ọdịnaya na-elekọta mmadụ na netwọk. Ndị ọrụ nwere ike ibubata vidiyo ma ọ bụ ihe oyiyi site na kọmpụta ụlọ ha ma ọ bụ nwee ike ịnweta mgbasa ozi ozugbo site na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta dịka ọ dị mkpa.
O nwere ike ime ọtụtụ ihe karịa naanị ịmepe ụzọ dị mfe.
O nwere otutu njiri mara nke obodo.
Ọrụ nwere ike mbubata media faịlụ si dị iche iche na-elekọta mmadụ media nyiwe.
Enwere ike ịtọ vidiyo dị ka nke nzuzo ma ọ bụ nke ọha.
Ọ na-enye ọtụtụ customizable nhọrọ maka foto mgbanwe na gbapụrụ ọsọ.
Ọ dịghị mfe iji.
Enweghi ike ibudata vidiyo ndị mepere emepe.
FlexClip bụ 100% free ma ka na-enye a dịgasị iche iche nke atụmatụ niile ọrụ. Enweghị nbudata dị mkpa, ebe ọ na-arụ ọrụ n'ịntanetị na ihe niile etinyere ihe ngosi mmịfe mmepe ngwaọrụ. Ndị ọrụ nwere ike ịgbakwunye vidiyo ma ọ bụ egwu na ikpo okwu na faịlụ nwere ike ịkekọrịta na ntanetị mgbasa ozi.
Kizoa bụ ihe ọzọ a maara nke ọma online video nchịkọta akụkọ na-enye ohere mfe ohere ịtụnanya atụmatụ enweghị aha. Onye nchịkọta akụkọ dị elu na-akwado ihe nkiri, ntụgharị, na mmetụta ma na-enye ọtụtụ nhọrọ egwu maka ịmepụta vidiyo mmekọrịta. Ọrụ nwere ike mfe hazie nkọwa nke oge, oge, size ma ọ bụ ọnọdụ, wdg, dị ka mkpa.
Nkebi nke 3: Best free ihe ngosi mmịfe ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo
Ndị chọrọ ka imepụta ihe ngosi mmịfe na gam akporo ama, nwere ike ibudata ndị na-esonụ free ihe ngosi mmịfe onye ngwa ọdịnala.
1. Akụkọ foto
Foto Akụkọ nwere ike ịzụlite oké ngosi na fim na ala na nzọụkwụ atọ. Ọrụ dị nnọọ mkpa iji họrọ foto site na ha ngwaọrụ, ike a ngosi mmịfe na chọrọ ikwu n'ụzọ na gburugburu, na akpatre ịzọpụta ma ọ bụ ịkekọrịta dị ka ha uto.
Enwere ọtụtụ nzacha, ihe nkiri na ndepụta okwu.
Ọ na-enye nsonaazụ mkpebi dị elu.
Enwere ike gbanwee ọsọ ọsọ dị ka mkpa ndị ọrụ si dị.
Naanị foto ole na ole ka enwere ike ịhọrọ.
2. PIXGRAM - video foto ngosi mmịfe
pixelgram bụ a ọma, mfe ma na kediegwu ngwá ọrụ na ike mfe anakọta niile foto ọnụ na-etolite a ngosi mmịfe na nnukwu ndabere mmetụta. E nwere ọtụtụ atụmatụ enwere ike ịhazi maka mgbanwe mgbanwe na uto gị.
Easy nkekọrịta na mmadụ mgbasa ozi nyiwe.
Dị mfe iji na nza nke atụmatụ.
Dị maka n'efu
Ọ na-enye isi edezi atụmatụ na mmetụta.
FilmoraGO bụ ngwa mkpanaka nke na-enye ahụmịhe njirimara nke ukwuu yana interface dị mfe iji. Ọ dị mfe ibelata vidiyo na ị nwekwara ike itinye nzacha dị iche iche na ọdịnaya na ọtụtụ isiokwu emebere. FilmoraGo enwetawo nlebara anya pụrụ iche site na obodo ndị ọrụ n'ihi nrụzi ọrụ ọkachamara yana ngwa ọrụ mmepe.
Ọ na-enye ọtụtụ nchịkọta isiokwu.
Ọ nwere ọtụtụ jụụ mmetụta dị ka agbara, ngwa ngwa ngagharị na ngwa ngwa ngagharị, wdg
Mgbe ụfọdụ, ọ na-aga ngwa ngwa na nnukwu faịlụ.
Part 4: Best Free Ihe ngosi mmịfe Maker Apps maka iOS
Wezụga iji Apple iMovie ike slideshows na gị iPhone, ị nwekwara ike gbalịa ndị na-esonụ free ngwa ike slideshows na iOS ngwaọrụ.
Ndị chọrọ ngwa ike n'ihu na ọgaranya na kensinammuo atụmatụ na ha iPhone ga-ahụ Idelọ nyocha slide ngwa na-akpali nnọọ mmasị. Ọ dị mfe ịhazi ihe oyiyi, egwu na vidiyo site na iji ngwá ọrụ a. Ọzọ, slideshows nke ọ bụla ogologo nwere ike mepụtara na ala.
SlideLab bụ ngwa dị elu, dị ike ma na-atọ ụtọ maka mmepe slideshows enwere ike iji maka ọkachamara na mkpa onwe onye.
Ọmarịcha ma dịkwa mfe iji ngwa.
Ọ dị mfe itinye mmetụta na-adọrọ mmasị.
O siri ike ịhazi foto dị ka achọrọ.
Nke a ngwa-enye ohere ọrụ ikpokọta foto n'ime okpokolo agba, na customizable akụkụ ruru, size na agba, wdg Ọ na-aga otu nzọụkwụ n'ihu na elu nzacha ike ukwuu mmekọrịta slideshows na ike ga-mepụtara na ala.
PicPlayPost na-enye ndị ọrụ ohere ịhọrọ gifs, vidiyo na foto, wdg. Maka imepụta ihe ngosi anya.
Ọ na-enye a mfe video mwekota ọrụ maka ihe ngosi.
Sequential na imekotaotuugbo playback nwere ike kere tinyere ọtụtụ ihe pụrụ iche atụmatụ.
Ọ na-enye ndị ọrụ ohere iche echiche na mpụga igbe ahụ na nhazi nke ọtụtụ vidiyo vidiyo.
Ọ na-adịghị na-enye ọ bụla iCloud dabeere na nkwado maka ebufe ma ọ bụ na-azọpụta ọdịnaya n'etiti dị iche iche ngwaọrụ.
Otu n'ime ihe kachasị mma anyị nwere ike ime na kọmpụta bụ ịmepụta ihe ngosi foto, ebe ihe oyiyi na-agagharị otu na nke ọzọ na-akpaghị aka. Anyị egosila gị ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma iji mepụta slideshows na foto iji hụ na ,ntanetị, na-enweghị mkpa iji mmemme. Oge eruola ka ị were nke kachasị amasị gị ma bido!
Tags: desktọọpụ ngosi mmịfe softwareihe nkirimgbanwefree ngwafree ihe ngosi mmịfe onyesoftware n'efufreemake video Ntụgharịkizoamicrosoftmobile ngosi mmịfe ngwaonline ihe ngosi mmịfe nyiwefoto ngosi mmịfefoto akụkọphotoseseresepixgramihe mmịfeslidlyslidely egosingosi mmịfeihe ngosi mmịfe ngwaihe ngosi mmịfe nyiwentinye vidiyoWondershare DVD ngosi mmịfe na-ewu ụlọwondershare ihe nkiri
Jun 13, 2021 na 9:03 nke ụtụtụ
Sammy daalụ maka edemede gị, ị bụ ezigbo odee akwụkwọ akụkọ gị na-amasị m, ana m eji ngwa SlideLab nke a dị egwu, ana m eji ngwa Vimory mepụta vidiyo slideshow (https://apps.apple.com/us/app/vimory-photo-video-maker/id1359573092). Ngwa a dị mfe iji, nnukwu UI/UX yana ọtụtụ atụmatụ.